“Tụfịakwa! I yighi nna gị, chaa chaa!”-Ọbianọ na-akọ Emeka Ojukwu, nta – hoo!haa!!
Aka na-achị Anambara Steeti, Wili Obianọ, akọwaala Emeka Ojukwu, nta dịka onye na eyighi nna ya bụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu chaa chaa. O kwuru nkea mgbe ọ na-akọwa na ihe Emeka Ojukwu, nta kwuru na ya na enye ya nsogbu ka ọ lọghachite otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance, APGA bụ okpo okpo asị.
Ojukwu, nta nọrọ n’ajụjụ ọnụ a gbara ya kwuo na Obianọ na -arịọ ya ka ọ laghachite APGA bụ nke ọ hapụrụ ka a na-achọm ime nhọpụta Gọvanọ Anambara Steeti n’ọnwa gara aga. Ọ sịkwa na Obianọ na-egwu “ndọrọ ndọrọ ụmụaka na nke ndi ime obodo”
Mana na nzaghachi ya site n’ọnụ onye ọrụ mgbasa ozi ya,Olivia Ọkpala, Obiano sịrị na Ojukwu sikporo ya asị, na ha abụọ akpabeghi kemgbe ọ bara APC. O kwukwara na o nweghi ihe ọ ga-erite ma Ojukwu laghachite APGA.
Ozi ahụ kwuru sị;” Ọ dị mwute Ojukwu, nta ịsị na Obianọ na-arịọ ya ka ọ laghachite APGA ebe o nweghi ọkwa o jibu na APGA nke o ji eso na ndi ọnụ na-eru n’okwu. N’ezie, o nweghị dị onye ma ya dịka onye APGA”
Obiano kọwakwara nwa Ojukwu ahụ dịka “onye na eyighi nna ya, chaa chaa” onye nke lụrụ ọgụ ndụ ya nile maka Ndigbo, ma kwusikwaa ike ebe ụmụnne ya Ndigbo kwụ, na ereghi ha”
‘Kedu ka obi ga-adị Ikemba ịhụ na nwa ya nwoke gbakụtara otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ hapụrụ iji jikọta Ndigbo azụ?”
” Anyị na-adụ Ojukwu, nta ọdụ ka o gaa n’ihu inwe añụrị na APC ma kwụsịkwa ịkparị Gọvanọ Obianọ, onye nke bụrụ ya okenye
Previous Post: Ọrịa írí (Meningitis)
Next Post: AFỌ ỤGBỌỌKA